के हो भाइरल डेंगु ? यो कसरी सर्छ ? यसका लक्षण र बच्ने उपाय जान्नुहोस्! - News Bihani
के हो भाइरल डेंगु ? यो कसरी सर्छ ? यसका लक्षण र बच्ने उपाय जान्नुहोस्!
डेंगु एक प्रकारको भाइरल ज्वरो हो । डेंगु एडिस एजेप्टाई र एडिस एल्वौपेक्टस नामक लामखुट्टेले टोकेर हुने तीब्र भाइरल संक्रमण हो । यो भाइरस डेंगु १, डेंगु २, डेंगु ३ र डेंगु ४ गरी चार प्रकारका हुन्छन् । डेंगुको भाइरसद्वारा संक्रमित भएको एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेले यो रोग सार्दछ । यो रोग सार्ने लामखुट्टे ग्रामीण क्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी पाइने गर्दछ । डेंगु रोग क्लासिक डेंगु, हेमोरेजिक र साक सिन्ड्रोमगरी तिन प्रकारको हुन्छ । क्लासिक डेंगु सामान्य प्रकारको डेंगु हो भने यो आफै निको हुन्छ ।
तर यदि कुनै व्यक्तिलाई डेंगु हेमोरेजिक ज्वरो वा डेंगु साक सिन्ड्रोम भएको छ भने यसको समयमै सहि उपचार नगरे मृत्यु हुन सक्छ । एडिज लामखट्टे कालो रंगको हुन्छ, जसमा सेतो थोप्लो पनि देखिन्छ । यो लामखुट्टेले विशेषगरी दिउँसो टोक्ने गर्दछ । औलो उत्पन्न गर्ने लामुखट्टे फोहोर पानीमा पाइने भए पनि डेंगु सार्ने लामखुट्टेले थुप्रै दिनदेखि हलचल नभएको स्वच्छ पानीमा फुल पार्छ । यो रोग सार्ने लामखुट्टे ग्रामीण क्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी पाइने गर्दछ ।
यसले स–साना सफा पानी जमेको स्थानमा फुल पार्ने गर्दछ भने वर्षाको पानी जम्ने टीनका डब्बाहरू, पानीका ट्याङ्की, थोत्रो टायर, रंगका खाली डब्बा, गमला, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरू, फुलदानी आदिमा यस्ले फुल पार्दछ। शहरी क्षेत्रमा यस्ता वस्तुहरू पर्याप्त मात्रामा हुने भएकाले पनि यो लामखुट्टे शहरमा बढी देखिन्छन्। नेपालमा यो रोग दिन प्रतिदिन तीब्र रुपमा फैलिदै गइरहेको छ । बर्सेनि विश्वमा करिब छ करोड व्यक्ति यो रोगबाट संक्रमित हुन्छन् । नेपालमा हालसम्म धेरै मात्रामा भने एडिस एजेप्टाई प्रकारका लामखुट्टे भेटिएका छन्। डेंगु गराउने दुई प्रकारका लामखुट्टेमध्ये एडिस एजेप्टाई बढी सक्रिय हुन्छन् भने एडिस अल्बोपिक्ट केही सुस्त हुन्छन्।
यो रोग लाग्दा एक्कासि ज्वरो आउने, टाउको, ढाड, जोर्नी दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने, रक्तचाप घट्ने, नाक, कान, गिजा, गुद्द्द्वारबाट रगत आउने जस्ता लक्षणहरु देखा पर्छन्।
असाध्यै टाउको दुख्ने, शरीरमा विमिरा आउने, वाकवाकी लाग्ने, पेट दुख्ने।
रक्तश्राव हुने वा शरीरमा रगत जमेको दागहरू देखापर्ने, बेहोश हुने देखा पर्न सक्छ ।
आँखाको गेडी तथा आँखाको पछिल्लो भाग दुख्ने, नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने, ढाड, जोर्नी तथा मांसापेशिहरू दुख्ने।
यो रोगबाट वच्नको लागि घर वरिपरि सरसफाइ गर्ने, सुत्दा झुलको प्रयोग गर्ने, लामो बाउला भएको लुगा लगाउने, घरका झ्याल एवं ढोकामा जाली लगाउने, रोगको शंका लागेमा तुरुन्त स्वस्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्ने गर्नुपर्दछ।
डेंगु ज्वरोबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुका साथै लामखुट्टेको वृद्धि रोक्नु पर्छ । लमखुट्टेको टोकाइबाट बच्न लामखुट्टे भगाउने मलहम दल्न पनि सकिन्छ ।
घरका झ्याल ढोकामा जाली लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । ज्वरो घटाउन सिटामोल खानुपर्छ तथा प्रशस्त झोल पदार्थ खानुपर्छ ।
ज्वरो घटाउने भनेर एस्पीरीन तथा आईबुप्रोफेन भने खान हुँदैन । कुलरमा रहेको पानीमा प्रत्येक हप्ता एक दुई चम्चा मट्टितेल हालिदिने साथै जम्मा भएको पानी सफा गर्ने ।
पानी जम्न सक्ने भाँडाहरू जस्तै गमला, फुलदान, खाली बट्टा, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरू, गाडीका काम नलाग्ने टायरहरू आदिमा पानी जम्न नदिने ।
डेंगु प्रभाबित जिल्लामा स्थानीय एफ। एम रेडियो तथा पत्र पत्रीका मार्फत राज्यका तर्फबाट डेंगु विरुद्दमा विभिन्न प्रकारका कर्यक्रम, विज्ञापन तथा विज्ञका अन्तर्वाता प्रशारण गरेर चेतना फैलाउन सकिन्छ।
फुलदानिमा रहेको पानी हप्तामा दुई पटक फेर्ने, लामखुट्टेले दिउँसो टोक्ने हुँदा दिउँसो बस्दा बाहुला भएको वा शरिर ढाकिने लुगा लगाउनुपर्छ । घर वरिपरि सफा सुग्घर राख्ने, पानी जम्ने खाल्टा खुल्टी पुर्ने गर्नु पर्छ ।
सम्भव भएसम्म दिउँसो सुत्दा पनि झुल प्रयोग गर्नु पर्छ, साथै साना केटाकेटिलार्य जुनसुकै समयमा पनि झुल भित्र सुताउनु पर्दछ ।